Pogba oo ka nixiyay Manchester United, xilli ay xiiseyneyso kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM - Idman news
Pogba oo ka nixiyay Manchester United, xilli ay xiiseyneyso kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
(Manchester) 23 Luulyo 2021. Maalmaha Paul Pogba ee Manchester United ayaa u muuqda inay noqdeen kuwo fara ku tiris ah, kaddib markii uu diiday inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo kooxda, xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in Paris Saint-Germain ay xiiseyneyso adeegiisa.
Paris Saint-Germain ayaa dooneysa inay xoojiso safkeeda, si ay ugu dagaalanto ku guuleysiga Champions League xilli ciyaareedka cusub, iyo tartamada kala duwan ee gudaha France, oo uu qeyb ka yahay horyaalka Ligue 1.
Sida laga soo xigtay warbixin uu daabacay wargeyska “Mirror” ee dalka England, Pogba ayaa diiday qandaraas ku kacaya 50 million pounds, si uu u kordhiyo qandaraaska uu kula jiro Manchester United, taasoo ka dhigeysa inuu ku sii dhawaanayo ka tagista kooxda reer England.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Paris Saint-Germain ay diyaar la tahay inay bixiso 45 million pounds si ay u soo iibsato Pogba, kaasoo qandaraaskiisa kooxda Manchester United uu ka harsan yahay kaliya hal sano.
Pogba ayaa Man United ku soo biiray sanadkii 2016 isaga oo kaga soo biiray kooxda reer Talyaani ee Juventus, tan iyo markaasna waxa uu kooxda ka qayb qaatay 206 kulan isaga oo u dhaliyay 38 gool, wuxuuna sidoo kale saaxiibadiis ka caawiyay 42 gool kale.
Si kastaba ha noqotee, Paul Pogba ayaa kooxda Manchester United kula guuleystay laba jeer Carabao Cup, iyo sidoo kale hal jeer oo ah tartanka UEFA Europa League.
Previous Manchester United oo horumar ka sameyneysa soo xero gelinta Raphael Varane… (Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
Next Chelsea oo ka fiirsaneysa inay ku xoojiso safkeeda ciyaaryahan hore ee kooxda Manchester United – Gool FM
“Way xanuun badan tahay daawashada tartamada Yurub la’aanta Arsenal” – Arteta – Gool FM
15 hours ago Mohamoud
Bayern Munich oo heshiiska u kordhisay mid ka mid ah xiddigihii la la xiriirinayey Kooxaha Real Madrid iyo Manchester United – Gool FM
16 hours ago Mohamoud
R/Wasaare Rooble oo bayaan ka soo saaray qoraalkii ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha
Madax goboleedyada oo qoraal wadajir ah kasoo saaray khilaafka Farmaajo iyo Rooble iyo kiiska Ikraan
Allen Road in Toronto to be fully closed this weekend for maintenance – Toronto
Western University orientation leader shares personal account amid online reports of student assaults September 17, 2021
R/Wasaare Rooble oo bayaan ka soo saaray qoraalkii ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha September 17, 2021
Madax goboleedyada oo qoraal wadajir ah kasoo saaray khilaafka Farmaajo iyo Rooble iyo kiiska Ikraan September 16, 2021
Allen Road in Toronto to be fully closed this weekend for maintenance – Toronto September 16, 2021
Reddit gleeful as MassMutual takes the heat for RoaringKitty’s actions September 16, 2021